Vaovao - Fanovana nomerika an'ny RIU tamin'ny fotoanan'ny COVID-19
Ny laharana faha-35 an'ny laharana RIU izay natsangana tao Mallorca dia natsangan'ny fianakaviana Riu tamin'ny 1953 ho orinasam-pialan-tsasatra kely, miaraka amin'ny fitokanana ny trano fandraisam-bahininy voalohany tamin'ny taona 2010, RIU Hotels & Resorts izao dia manana trano fandraisam-bahiny 93 any amin'ny firenena 19 izay mandray olona maherin'ny 4,5 vahiny an-tapitrisany isan-taona.
Manomboka amin'ny marika efa antitra hatramin'ny ESK rahona ZKONG
Ao anatin'ny fizotrany hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa tamin'ny fotoan'ny COVID-19, ny hotely RIU chain dia nitady fomba hanatsarana ny endrika sy fahatsapan'ireo trano fisakafoanana ao aminy, ary hiantohana ny fahafaha-manolotra vaovao momba ny sakafo amin'ny fiteny maro nefa koa manaja ho an'ny lavitra ny fiaraha-monina. Ankoatry ny RIU dia naniry ny hampihena ny fotoana sy ny vidin'ny fanavaozana ny menus.
Abensys, mpiara-miasa aminay espaniola izay nanomboka ity tetikasa ity, dia nilaza fa tsotra ny fampidirina amin'ireo rafitry ny RIU amin'ny alàlan'ny API of ZKONG. Ary ny ESL an'ny ZKONG rehetra dia miara-mihazakazaka amin'ny sehatra azo antoka sy haingana ary mitovy aminy, izay azo ampiasaina manerantany tsy misy fametrahana, ny mpiasa sy ny vahiny dia mahazo antoka fa ny fampahalalana momba ny sakafo dia voatazona amin'ny fiteny samihafa ary havaozina amin'ny fotoana tena izy.
· Fametrahana haingana sy mora
· Fampisehoana mazava sy miavaka
· Serivisy tsy ifandraisana
· Fiasana tsy misy taratasy
· Safidy tsy voafetra ho an'ny famolavolana atiny